နောက်ဆုံးခံတပ် ~ Myanmar Express
Islamisation ဟာမြန် မာနိုင်ငံမှာ မကြာမီတကယ်ရင်ဆိုင် လာရတော့မယ်ပြသနာ ပါ ။အခုအချိန် မှာ အာဖဂန်နစ်စတန် က လူနည်းစု ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တွနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား က လူနည်းစု ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တွေဟာရာစု နှစ်ပေါင်း များ တည်တံ့လာခဲ့တဲ့ စေတီပုထိုးပေါင်းထောင်သောင်းချီပြီး ရှိခဲ့တဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ အာဖဂန်နစ်စတန်နိုင်ငံကြီးဟာဘာဖြစ်လို့ များအခုလိုမွတ်ဆလင်နိုင်ငံအဖြစ်ကိုကျရောက်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်းပြန်တမ်းတငိုကြွေးနေမှာအမှန်ပါပဲ။ဥပမာပြောရရင် အာဖဂန်နစ်စတန် က World Largest Buddha Statueကဘာ့အကြီးဆုံးဗုဒ်ဓရုပ်ပွားတော်ကြီး ကို အာဖဂန်ကဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တွေထုဆစ်ပူဇော်ခဲ့တုန်းက ဘယ်လောက်သပ်ပယ်ကြည်ညိုဖို့ ကောင်းခဲ့သလဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရွေတိဂုံစေတီတော်ကြီး ထီးတင်ခဲ့သလို လူတွေ စည်ကားခဲ့မှာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ ရွေတိဂုံစေတီတော်ကြီး ဟာ မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ ဂုဏ်ဆောင်။အထွတ်အမြတ်ကြည်ည်ို စရာဖြစ်ဲ့သလိုပါပဲ။အာဖဂန်နစ်စတန် က World Largest Buddha Statueကဘာ့အကြီးဆုံးဗုဒ်ဓရုပ်ပွားတော်ကြီး ဟာလည်းတစ်ချိန် တုံးက အာဖဂန်ကဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တွေ ရဲ့အမြတ်တနိုးအထွတ်အမြတ်ထားခဲ့တဲ့ကြည်ညို စရာ ဗုဒ်ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး။အဲဒီအချိန်တုံးကလည်း အာဖဂန်က ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တွေကို အမြော်အမြင် ရှိတဲ့လူကြီးတွေက မွတ်ဆလင်တွေ အကြောင်းကို ကျွန်တော်အခု သတိပေးခဲ့သလိုပဲသတိပေးခဲ့ကြမှာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ လိုအခုလို စောက်ဂရု မစိုက်တာ ။လှောင် ပြောင် တာတွေကြားထဲမှာပဲ အာဖဂန်နစ်စတန် ဟာ ဗုဒ်ဓဘာသာ စစ်စစ်နိုင်ငံကနေမွတ်ဆလင်နိုင်ငံအဖြစ် ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ သွတ်သွင်းခြင်းခံရတဲ့အခါ မရှုနိုင် မကယ်နိုင် ပဲ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဝါးမျိုချင်းကိုခံရပါတော့တယ်။အာဖဂန်နစ်စတန် ဟာ မွတ်ဆလင်အများစုနိုင်ငံဖြစ်သွားတဲ့ အခါ အဲဒီနိုင်ငံကဗုဒ်ဓအမွေအနှစ် ။အဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကိုမီးတင်ရှို့ ဖျက်ဆီးတဲ့အခါ။ကိုယ့်နိင်ငံမှာကိုယ်နေရင်း နဲ့ပဲ လူနည်းစုဘ၀ရောက် ရှိသွားရရှာတဲ့ဗုဒ်ဓဘာသာဝင် အာဖဂန်လူမျိုးများဟာ အံကြိတ် ။ ငိုကြွေးယုံမှတပါးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါတွေဟာတစ်ပုံစံတည်းတွေပါပဲ။ မူလ ကဟိန်ဒူ ဘုရားကျောင်းထောင်သောင်းချီနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နဲ့ ပါကစ်စတန်မှာ ဟိန်ဒူဘုရားကျောင်းဘယ်နှခုပဲကျန်မယ်ထင်သလဲ။အားလုံးနီးပါး ကိုမွတ်ဆလင်တွေက မီးရှို့ ဖျက်ဆီးပြီးပါပြီ။နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ ကျော် ခရစ်ယာန်နိုင်ငံအဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့ ဆားဗီးယား ကိုဆိုဗိုပြည်နယ် မှာ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ခရစ်ယာန် Church ပေါင်း ၁၅၀ ကျော် ကိုမွတ်ဆလင်တွေက မီးရှို့ ပြီး ။ဗလီတွေအသစ် ၂၀၀ ကျော် ဆောက်လာတဲ့အခါ ကိုဆိုဗိုပြည်နယ် ကလူနည်းစု ဆာဘ့်လူမျိုး ခရစ်ယာန်တွေ ဟာ ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ဘ၀ကိုရောက်သွားပါတယ်။နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ ချီပြီးတည်တံ့လာတဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအဲဒီလိုဘ၀ ရောက်မှာစိုးလို့ ပြောနေ တာ…။နားလည်လား။ ဦးနှောက်ရှိရင်။ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိရင်ဘာစောက်အဖွဲ့အစည်း မှအာဏာရဖို့ ။မြဲဖို့ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ သိ ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်ကျရင်အာဖဂန်လို မွတ်ဆလင်အများစုနိုင်ငံဖြစ်သွားတဲ့ အခါ ကျရင်ရွေတိဂုံစေတီတော်ကြီး ကရွှေတွေခွာချပြီး ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ဖေါက်ခွဲတဲ့အခါကျရင်အဲဒီ အကြမ်းမဖက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအော်နေတဲ့ကောင်တွေကအသေခံကာကွယ်မဲ့ကောင်တွေလား။ ဝေးသေး ….။မြို့ ဦးစေတီတွေနေရာမှာမြို့ ဦးဗလီကြီးတွေ မဖြစ်စေချင်ရင် မျိုးချစ်တဲ့လူတွေအချိန်မှီတု န်း ကာကွယ်ကြ…..(ကာကွယ်ရမယ့်စိတ်ဓာတ်ကိုသားစဉ်မြေးဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြ)မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်နေလား။ အခုထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာဆော်နေပြီ။သိလား။ဒါတောင်ထိုင်းလူဦးရေရဲ့ ၁၀% ပဲရှိသေးတာ.။ ထိုင်းတောင်ပိုင်း ကဗုဒ်ဓဘာသာကျေးရွာတွေကို ၀င်သတ်။ ဘုန်ကြီးကျောင်းတွေမီးရှို့။မြန်မာ နိုင်ငံကလူဦးရေ သန်း ၆၀ လောက်ပဲ ရှိတာ ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကလူဦးရေသန်း ၂၀၀ နီးပါးရှိတယ်။ နားလည်လား။မွတ်ဆလင် သန်း ၂၀ လောက်လွတ်ပေးလိုက်တာနဲ့မြန်မာ နိုင်ငံ Game Over သွားမယ်။ နားလည်လား။…………………………………..အစ်ဆလာမ်ဘာသာကိုတီထွင်ခဲ့သူ မို ဟာမက်ကြီး အကြောင်းသိကောင်းစရာလူ့ သမိုင်းမှာ အမြင့် မြတ် ဆုံးတမန်တော်လို့မွတ်ဆလင်တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့တမန်တော်ကြီးမို ဟာမက်ရဲ့ ရှစ်နှစ် အရွယ်ကလေးသူငယ်အပါ အ၀င် အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုအာလာကြီးအလို အရ ရက်ရက်စက်စက်မုဒိန်းကျင့်ခဲ့သော ကာမဘီလူး ၊ကျွန်ကုန်သည်တဏှာရူးကြီး မိုဟာမက် ဧ။် စိတ်တဇဆိုင်ရာ ငယ်စဉ်ဘ၀ဖြစ်စဉ်များ။ကိုရမ်ကျမ်း(Qur’an ) နှင့် မိုဟာမက် မှတ်တမ်းများ(Hadith) မှကောက်နှုတ်ရေးသားသည်။အကျဉ်းချုံးပြောမယ် ။မိုဟာမက် မွေးပြီးချိန်မှာ အဖေ နဲ့ အမေသေသွားတယ်။ ဆင်းဆင်းရဲ ရဲအနှိမ်ခံကြီးပြင်းလာရတယ်။ နာကျည်းမှုတွေစုထားတယ်။ဆင်းဆင်းရဲ ရဲ အနှိမ်ခံကြီးပြင်းလာရမိုဟာမက် ဟာ သူ့ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ သူ့အမေလောက်ရှိတဲ့ ကလး ၂ယောက် ရှိတဲ့ မုဆိုးမကြီး ကဒီဂျာကို သူ့ ဘ၀၀မ်းရေး။နောင်ရေးအတွက်သိုက်တူးပြီးယူ ခဲ့တယ်။မိုဟာမက်ဟာ သူ့ အမေလောက်ရှိတဲ့မုဆိုးမကြီးကို မချစ်ပဲယူခဲ့ရတဲ့အတွက်ကာမတဏှာစိတ်တွေနာကျည်းမှုတွေစုထားပြီးနောင်အခါမှာ ချောပေ့။ ငယ်ပေ့ဆို တဲ့၈နှစ် ။ ၉နှစ် ။၁၀ နှစ်အရွယ်လေးတွေကို အသားကုန်ကျုံးလိုးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ှSex Maniac ကာမဆိုင်ရာ စိတ်တဇဝေဒနာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗမာအပါအဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများ..."ငါဟာ ရခိုင်လူမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ရခိုင်လူမျိုးဟာ ငါ့လူမျိုးဖြစ်တယ်"ဆိုတဲ့ဝံသာနုရက္ခိတ စိတ်တွေမွေးကြပါ။-အုပ်ချုပ်သူတွေက ထိထိရောက်ရောက် အရေးမယူဘူး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလျစ်လျူရှုနေတယ်။-မီဒီယာတွေရဲ့ အပေါက်တွေ ပိတ်နေတယ်၊ ကိုယ့်အမျိုးသမီးလေးသတ်ခံရတာကိုဇောင်းပေးမရေးဘူး၊ တိရိစ္ဆာန်၁၀ကောင်သေတာကျတော့ ကမ္ဘာပျက်နေတယ်။ နိုင်ဂရု၊ဖားသားလန်းဒ်၊ အစရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ပိုင်တွေက ဗိုလ်ချုပ်တွေ၊ မီဒီယာတွေအကုန်လုံးကို သူ့တို့အမျိုးဘက်လိုက်အောင် အကြီးအကျယ်လိုက်ဖားနေတယ်။-မင်းကိုနိုင်၊ မြအေး အစရှိတဲ့ မျိုးမစစ်တွေက "အစွန်းရောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ" လို့ပြောတယ်၊ မွတ်စလင်ကုလားကို မွတ်စလင်ကုလားလို့သုံးနှုန်းတာကိုမကြိုက်ဘူးပြောတယ်။-ညွှန်ကြားရေးမှုး မျိုးမစစ်ရဲထွဋ္ဋ်ဆိုတဲ့ကောင်က သတင်းစာမှာ ကုလားကိုဖားတယ်၊တောင်းပန်တယ်။ ခွေးမသား ရာဇဝင်ရိုင်းမယ့် အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။-ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောတော့သူ့နားကုလားအကုန်ပြေးကပ်နေကြတယ်။ တခြား အာဏာရှင်လူတန်းစား၊နိုင်ငံရေးသမား၊ အနုပညာရှင်၊ နာမည်ကြီး မေတ္တာရှင်ကြီးတွေကလည်းလေပြည်အေးလေး နဲ့ခုမှ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ခုမှမိုးလင်းမိုးချုပ်အော်နေကြတယ်။ (သူတို့ အမေ၊ သူတို့နှမ မဟုတ်လို့ပြောရက်တာပါ။ အကြမ်းဖက်တာကို အားပေးရမယ်လို့ မဆိုလိုဘူး။ ဒါပေမယ့်ယုတ်ညံ့တဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်ဝါဒကို ကာကွယ်ပေးနေလို့ပြောတာ)။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများ...အာဏာရှင်တွေ၊ နာမည်ကြီးတွေ၊ ပါတီတွေ၊ လူချမ်းသာတွေ၊ မီဒီယာတွေတော်တေ်ာများများက မြန်မာနိုင်ငံကို Islamic နိုင်ငံဖြစ်အောင်တွန်းပို့နေတာ အထင်ရှားပါပဲ။ အဓိကကတော့ ပညာမတတ်ခြင်း(ဘွဲ့ရသည်ကိုမဆိုလိုပါ)၊ ပညာတတ်သောသူကလည်း မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်အခြေခံနည်းပါခြင်း၊ အာဏာရရန်သာ အာရုံစိုက်နေကြခြင်း၊ စစ်ဘက်၊အုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှ အရာရှိကြီးငယ်တို့ကလည်း ကုလားတိရိစ္ဆာန်တို့၏ငွေအားသုံးကာ လူဝါးမျိုနေမှု၊ ကျိုးစားနေမှု၊ လုပ်ဆောင်နေမှုကို လက်ခံခြင်း၊အစရှိတဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာတို့ကြောင့်ကုလားတိရိစ္ဆာန်တို့အားကောင်းသည်ထက်အားကောင်းလာနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဒီလိုဖြစ်နေ၊ ပျက်နေပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများအနေနဲ့ လုပ်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်။လုံးဝအကြမ်းမဖက်ကြပါနဲ့။ ဒီနည်းကပြသနာကိုဖြေရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ခုအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အရေအတွက်ကများနေသေးတော့ သူတို့ကိုလုပ်ရင် အော်မှာပါပဲ။ (50%- 50%) ဖြစ်လာတဲ့နေ့ကျရင်တော့ ဓါးဆွဲပြီးနီးရာကိုသတ်ပါလိမ့်မယ်။"လူကိုမသတ်ကြပါနဲ့... ဝါဒကိုသတ်ကြပါ"-ကုလားတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို ရခိုင်လူမျိုးတွေ အမြဲသတိထားတာကို အတုယူကြပါ။-ဒီမိုကရေစီစွတ်အော်နေတိုင်း၊ စစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်နေတိုင်းမယုံကြပါနဲ့၊အဲဒီလူဟာ ဒီမိုကရေစီလုပ်နေတာနဲ့ လက်မခံကြပါနဲ့ဦး၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ရှိရဲ့လားဆန်းစစ်ကြပါ။(စစ်အစိုးရကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ ဖာနိုင်ငံကဖြေးဖြေးချင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် ရဲတိုက်၊ မြအေး၊ မင်းကိုနိုင်၊မောင်းတောမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဇော်ကိန်အာမက် (ခေါ်)အောင်ဇော်ဝင်း အစရှိတဲ့...ခွေးတွေ သွားယုံရင်တော့ ဖာနိုင်ငံနေ့ချင်းညချင်းဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။)-*(အရေးတကာ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်)*အရေးအကြီးဆုံး ကတော့ ကုလားတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ စီးပွားရေးကိုအားမပေးကြပါနဲ့တော့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့ ။ ရှေးတုန်းကအားပေးခဲ့ကြရင်လည်း ခုကစပြီး ရပ်မယ်ဆိုရင်မှီပါသေးတယ်။ အဆိပ်ပင်ရေလောင်းတာဟာ အကျိုးမရှိပါဘူး။မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးက* "ကိုယ့်လူမျိုး(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသား)က အမြတ်တစ်ဆယ်ယူပြီး၊လူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေက အမြတ် တစ်ကျပ်ပဲယူတယ်ဆိုရင်တောင်ကိုယ့်လူမျိုးကိုပဲအားပေးပါ။ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ အမြတ်တစ်ဆယ်က ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက်မယ့် တစ်ဆယ်ဖြစ်ပြီး သူတို့ရတဲ့ အမြတ် တစ်ကျပ်ကကိုယ့်အမျိုးသမီးတွေကို ငွေနဲ့ပေါက်ယူမယ့် တစ်ကျပ်ဖြစ်တယ်"... *လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဥာဏ်အကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးကအဓိပ္ပါယ် မရှိပဲ မမိန့်တော်မူခဲ့တန်တာကို အမှတ်ရစေလိုပါတယ်။ကုလားကျော်နိုင်ဦးရဲ့ နိုင်ဂရုနဲ့ အိမ်ဆောက်မှကောင်းကြမှာလား၊ဘင်္ဂါလီကုလားကျော်မြင့်ရဲ့ ဖားသားလန်းဒ်နဲ့ ဆောက်မှ၊ အိမ်အလှဆင်မှလှကြမှာလား၊မိုဘိုင်းကင်းမှာ ဟန်းဆက်ဝယ်မှ လိုင်းဆွဲအားကောင်းကြမှာလား၊ ၇၈၆ဒန်ပေါက်၊ ကြက်သားသုတ် စားမှအရသာရှိကြမှာလား၊ ကုလားတွေရဲ့ သစ်ဆိုင်၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်၊ ရှိရှိသမျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဝယ်မှ၊ အားပေးမှ ဖြစ်ကြမှာလား၊ ရဲတိုက်ပဲချောတာလား၊ ကျန်တဲ့မင်းသားတွေ မချောကြတော့ဘူးလား၊စီးပွားရေးသမားတွေကလည်း ဒီကုလားနဲ့ကြော်ငြာရိုက်မှ ပေါက်ကြမှာလား၊မြအေးလုပ်ပေးမှ ဒီမိုကရေဒီရကြမှာလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့... ???စစ်တမ်းတွေအရ ကုလားတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ စီးပွားရေးကို အားပေးတဲ့အထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသားတွေက ၉၈% လောက်ရှိတယ်တဲ့။ အဲတော့ ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရပ်တည်နေမှု ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကပဲပေးနေတာပါ။ ကုလားဆို မုန်းတယ်ဆိုတာနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။လက်တွေ့ သူတို့ကိုအားမပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကုလားဆိုသတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူကိုသတ်လို့ ဘာမှဖြစ်မလာဘူး... လမ်းစဉ်ကိုသတ်မှဖြစ်မယ် ဆိုတာသတိချပ်သင့်လှပါတယ်။ကဲ ဒီနေ့ကစပြီး... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကုလားရဲ့၇၈၆ စီးပွားရေးကို မဝယ်၊ အားမပေးပဲ၊ ပိုက်ဆံရတိုင်း ကုလားဘက်မပါပဲ၊ အာဏာလိုချင်တိုင်း ကုလားကို မထောက်ခံပဲ၊ လာဘ်ထိုးတိုင်းမှတ်ပုံတင်မထုတ်ပေးပဲ၊ နေရာမပေးပဲ အဆိပ်ပင်ရေးမလောင်းပဲနေကြရအောင်စို့လားဗျာ.... Myanmar Express
29 June 2012 15:16
ကမ္ဘာ့ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ် ....ဖျက်အားအပြင်းဆုံး ကမ္ဘာဖျက်ဗိုင်းရပ်စ်၊ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကို ဖျက်ဆီးမဲ့ အစ္စလာမ်ဗိုင်းရပ်စ်...ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် အနိုင်ယူပါ။http://islamvirus.blogspot.com
29 June 2012 15:23
inn bal lo mifa ka pau htar par laint
29 June 2012 18:55
စာအသွားအလာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ရေးသားသူဟာ သတင်းရေးနေကျမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်နီုင်ပါတယ်... သူဟာ အမျိုး၊ ဘာသာ ကွယ်ပျောက်မှာ စိုးရိမ်ပြီး စေတနာအမှန်နဲ့ ရေးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်တာနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်.. လေးစားပါတယ်ဗျာ.. ဒါပေမယ့် တချို့ စာအသုံးအနှုန်းလေးတွေ tempo နဲ့နဲ့ လျှော့လိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်... မွတ်စ်ကုလားတွေ ကို စီးပွားရေးဦးချိုးနိုင်မှ တားနိုင်မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သင့်ပြီ ဒို့မြန်မာတွေ... သာပေါင်းညာစားတွေကို သတိထားကြတော့
29 June 2012 19:46
အခုစာေ၇းသူ၇ဲ့စိတ်စားပါတယ် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိူးဘာသာနှင့်သာသနာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကို၈ုဏ်ယူပါတယ် မြန်မာလူမျိူးတိုင်းဒီလိုစိတ်ဓာတ်မွေးကြပါ မူဆလင်လူမျိူးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ၇ုပ်အညံ့ဆုံးလူမျိူးပါ လည်လှီးတယ် ခေါင်းဖြတ်တယ် ၇က်၇က်စက်စက်လူတွေသတ်တယ် အဲဒီဘာသာကို ကမ္ဘာကဘယ်ဘာသာမှလက်မခံပါဘူး ခ၇စ်ယာန်နှင့်ဗုဒ္ဒဘာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းပြီးတိုက်ခိုက်ကြဖိူ့လိုပါတယ် နောက်ပြီးတော့မူဆလင်တွေဟာ ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာလဲ သူတို့မူဆလင်ဈေးဆိုင်တွေမှာအားကြပါတယ် ထမင်းစား၇င်လဲမူဆလင်ထမင်းဆိုင်တွေမှာဘဲစားကြပါတယ် လူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေ၇ဲ့ဆိုင်မှာလုံး၀၀ယ်မစားကြပါဘူး ကျွန်တော်တို့အနေနှင့်လဲ မူဆလင်တွေေ၇ာင်းတဲ့ဈေးဆိုင် ထမင်းဆိုင်တွေမှာလုံး၀၀ယ်မစားကြဖို့တိုင်းတွန်းချင်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတိုင်း အမျိုးဘာသာသနာကိုအသက်ထက်မက တန်ဖိုးထားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်
30 June 2012 01:20
30 June 2012 08:34
He is right we all should do that. Do buy anything from them.
27 April 2013 08:31
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...မြန်မာတွေသတိရှိကြပါ..ကမ္ဘာ့ဂင်းနစ်မှတ်တမ်း ၀င်..မင်းကွန်းဆရာတော်ကအကြောင်းသိလို့မှာခဲ့တာပါ...ဆရာတော်ဟာစာအုပ်ပေါင်းများစွာဖတ်ပြီး..အတွေးအခေါ်တွေသိမြင်ပြီးဖြစ်တယ်...န်ိုင်ငံအကြီးအကဲတွေ...ပညာရှင်တွေသင်ခဲ့တဲ့စာတွေပြန်မေးကြည့်ပါ..သိသေးရဲ့လားလို့..ဖတ်ပြီးမေ့တတ်တဲ့ပညာရပ်တွေပါ... ဒါကြောင့်လက်ရှိလူတွေပြောတာထက်..မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးပြောတာကိုနားထောင်ကြပါလို့..ပြေထားပါရဲ့နဲ့..ဟန်ဆောင်ပြီးနောင်တရပါပြီ မလုပ်ကြပါနဲ့...နောင်တရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်နှမတွေ..သမီးတွေဟာကုလားတွေရဲ့...နံပါတ်ဘယ်လောက်မှန်းမသိတဲ့..မယားဖြစ်နေလောက်ပြီ..အားလုံး....သတိ........
အစ္စရေး ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံမှ အဆင့် မြှင့်တင်ထားသော ထိရောက်မှု အားကောင်းသည့် ၁၅၅ မီလီမီတာ ကျည်များ ထုတ်လုပ်လာခြင်း
[image: အစ္စရေး ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံမှ အဆင့် မြှင့်တင်ထားသော ထိရောက်မှု အားကောင်းသည့် ၁၅၅ မီလီမီတာ ကျည်များ ထုတ်လုပ်လာခြင်း] အစ္စရေး ကာကွယ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ အလုပ်သဘောခရီးစဉ် သွားရောက်ရာမှ နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
နေပြည်တော် မေ ၂၃
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့အလုပ်သဘောခရီးစဉ် သွားရောက် ပြီး...
ဦးတေဇ နဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး ပွဲ
အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) တို့၏ လာမည့် အင်္ဂါနေ့ မြစ်ကြီးနားမြို့ဆွေးနွေးပွဲ သည် အေးအေးဆေးဆေး အခြေအနေများနှင့် အဆုံးသတ်နိုင်ဖွယ် ရှိနေသည်။နှစ်...
Mecမှထုတ်သော800 Mhz ဖုန်းများအတွက် Internet settings ချိတ်နည်း
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦး ခါးပိုက်နှိုက် ခံလိုက်ရပေမယ့် အဲဒီခါးပိုက်နှိုက်ကို ဖမ်းမိလိုက်ပါ တယ်။ ပည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မိရင်ချွမ်းဟာ ဧပြီလ ...
တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှု ဆက်ဆံရေးများအား မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဥရုဂွေးသမ္မတ ဂျို့စ်မူဂျီကာက ပြောကြား
[image: တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှု ဆက်ဆံရေးများအား မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဥရုဂွေးသမ္မတ...
ဘင်္ဂါလီစာရင်းကောက်စဉ် ဆူပူမှု ကြိုးကိုင်သူဟု ယူဆရသူများ တရားရုံးတင်မည်
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့၌ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး စာရင်းကောက်ခံ ရာတွင် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ များကို ခဲများဖြင့်ပစ်ပေါက်ကာ ဆူပူမှု ဖန်တီးခဲ့ရာတွင် နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်လ...